Ny hemangioma kapila dia taratra manjavozavo izay mitombo noho ny fanangonam-bokatra ao amin'ny faritra kely amin'ny vatana. Matetika dia efa teraka ity tsaho ity, saingy mbola mila miatrika toe-javatra ianao rehefa misy fanabeazana toy izany amin'ny olon-dehibe.
Efa ela ny dokotera no nanomboka nianatra ity aretina ity, saingy hatramin'izao dia tsy afaka nanapa-kevitra izy ireo fa misy antony manokana izay manomboka amin'ny fanombohan'ny fivontosana. Na eo aza izany, ireo manam-pahaizana dia nampitombo ireo teoria maromaro manazava ny antony mahatonga ny hemangioma kapitalary amin'ny olona sasany:
ratsy ny tontolo iainana - mampihena be ny fahantrana;
ela be eo ambany masoandro.
Hemangioma amin'ny aty
Ny hemangioma amin'ny atiny koa dia tsy fahita firy ny neoplasma. Raha ny marina, ny fivontosana - vondron'ireo sambo, nandritra ny fampandrosoana izay nisy ny tsy fahombiazany. Ary matetika no mitranga izany amin'ny vanim-potoanan'ny embryonic. Ny hemangiomas ao amin'ny aty dia lava sy kapila.
Amin'ny ankapobeny dia misy ny tabilao tokana, ny haben'ny dia tsy mihoatra ny 4 santimetatra. Rehefa avy nahita azy ireo tamin'ny fiainan'ny olona dia tsy misy fiovana. Amin'ny tranga tsy fahita firy dia mitombo ho 10 na mihoatra ny hemangioma. Amin'ny toe-javatra toy izany dia tsara ny manatona dokotera.
Ny fitsaboana ny hemangioma kapana amin'ny aty
Tokony hijery tsy tapaka ny endrik'ity karazana ity. Aorian'ny fotoana isa-potoana dia ilaina ny mandalo fanadinana. Misy marika maromaro momba ny hemangioma izay ahitana ny fidirana amin'ny fitsaboana:
Eo amin'ny sehatra izy ary manomboka mangeja ny taova;
Mitombo hatrany ny fivontosana;
Ny neoplasma dia mamoaka kansera.
Saingy misy ihany koa ny toe-draharaha rehefa voarara ny asa:
Ny voan'ny tsindry dia nisy fiantraikany tamin'ny fantsom-bokatry ny atiny;
efa voarefo cirrhosis ;
Ny hemangioma dia miparitaka avy hatrany amin'ny tasy roa.
Fitsaboana hemangioma kapila amin'ny hoditra
Ny iray amin'ireo fomba malaza indrindra amin'ny fitsaboana hemangioma kapila dia fitsaboana fitsaboana. Ny karazana fanafody, dosia sy faharetan'ny fitantanana dia voafaritry ny manam-pahaizana manokana, miankina amin'ny toetran'ny tsirairay amin'ny vatan'ny marary.
Misy fomba hafa hiadiana amin'ny neoplasma. Ny fitsaboana raha tsy misy fampiasana scalpel dia mety ho ireto karazana manaraka ireto:
Mikrôvaka sy radiotherapy;
mangatsiaka amin'ny azota afovoany;
ny fihenanam-pandehan'ny hafanam-po sy tsy miova.
Tsy misy dikany ny fanesorana tsikelikely kely amin'ny vatana. Raha misy hemangioma kapila eo amin'ny tarehy na faritra misokatra eo amin'ny hoditra, dia manoro hevitra ny manam-pahaizana fa mbola misy fepetra sasany. Hanampy izy ireo hanala ny fahatsapana tsy fahatsapana. Ny teboka madinidinika dia nesorina tamin'ny kapila elektrika. Ary raha misy ny tsoka tafiditra, dia azo ampiasaina ny azota sy ny alikaola.
Ivon-toeram-pitsaboana maro no manome ny fampiasana teknolojia laser. Efa nanaporofo izany ny fomba fahombiazana. Taorian'ny fampiasana azy, dia tsy misy intsony ny hadisoana kosmetika.
Dokotera maro dia manoro hevitra anao mba hihaino ny hemangioma ao amin'ny hazavana. Raha tsy manitatra ny fanabeazana dia tsy afaka manao na inona na inona ianao. Raha tsy izany dia ilaina ny manasaraka ny fitsaboana amin'ny iray amin'ireo fomba roa:
Fandotoana ny fivontosana amin'ny X-ray. Rehefa mandeha ny fotoana dia mihena ary mihitsoka tanteraka.
Ny firaiketam-pandaminana - ny fifindran'ny sambo sasany izay mahatonga ny taolam-pata, hany ka tapaka ny sakafon'ny tumora ka maty.
Novidina ny monocytes
Toe-tsetroka ambany - avo be
Malemy hoditra hoditra
Ny tsy fandriampahalemana segondra dia avoitra
Nahoana izy no midradradradra ao an-kibony?
Ny lokon'ny loko samihafa
Fanaovana famelabelaran-tarehy - endri-javatra tsy miavaka
Noho ny fitsaboana cyst amin'ny oviana?
Mickey Rourke dia nipoaka niaraka tamin'ny olon-tiany Rosiana taorian'ny fifandraisana 5 taona
Saron'ny tara mainty
Ny fomba fandresen-dahatra
Hydrangea ao anaty vilany iray
Valanjavabatra miaty fanindroany
Kofehy fanamboamboarana fanorenana anatiny
Brad Falchak niarahaba an'i Gwyneth Paltrow malalany tamin'ny faha 45 taonany
Ahoana no hiantsoana demonia?
Adnexitis - fitsaboana amin'ny antibiotika